Life Formula - Формула Жизни - נוסחת חיים - languages zulu
Ukwenza ngcono impilo, ukuthuthukisa ubuntu, ukuxhumana namandla akhayo kanye nokwakha ukuvumelana noMkhathi:
Hlala ngokunethezeka bese uthi:
Ngiyakwamukela ini kubhaliwe kumaphoyinti 1 no-2 layisense engenhla. Ngemuva kwalokho, udinga ukuthinta inkinobho enkulu yangakwesokudla kule layisense. Futhi ukuqhubeka nokuhlala kamnandi cishe imizuzu eyi-13.
Ngesikhathi sokuqala sokusebenzisa le divayisi, udinga ukuhlala imizuzu engama-30-35, uphuze ingilazi enkulu yamanzi. Ngemuva kwalokho (ngemuva kwalokhu kusetshenziswa kokuqala) kuzodingeka ukuthi uyeke ukwenza umsebenzi onzima futhi uyeke ukushayela okusheshayo (i-90 km / ph noma ngaphezulu) - ngamahora ama-2-3.
(Uxolo, kodwa lokhu kuhumusha ngokuzenzakalela. Ukusiza noma ngubani odinga lolu lwazi njengamanje, siluhumushela ezilimini ezingama-70. Uma ufisa, ungafunda imininingwane eqinisekisiwe nephelele ngesiNgisi).
Inikezwe ilungelo lokuhlola idivayisi isonto elilodwa ngaphandle kwemali noma idatha yezezimali. Ngakho-ke, noma ngabe ekuqaleni le divayisi ibonakala ingajwayelekile kuwe noma ingenangqondo kuwe, ungalahli leli thuba!
Ekupheleni kwesonto lokuqala lokusebenzisa lolu hlelo, uzokwazi ukuqhubeka ulusebenzisele imali yokubhalisa ekhonjiswe ngezansi. Uma ufuna ukwenza okunye ukuzindla, ukuphulukisa, ungafunda ngalezi zizindlo ezingezansi (ngemuva kwencazelo yale divayisi nohlelo).